Fampidinana fanasitranana fanasitranana, fihenam-bidy
Home / Applications / Induction Hardening / Fanamafisana induction
Sokajy: Induction Hardening Tags: hamafin'ny, ny fikoloana fitsaboana, ny haavon-javatra malefaka mafy, ny fihanaky ny vovoka, fanasitranana fanasitranana, ny fikarakarana ny fikorontanana, ny fanamafisan'ny rivotra
Induction hardening Treatment dia ankasitrahana ho an'ny faritra izay iharan'ny enta-mavesatra. Ireo fampihetseham-poko manokana dia ahitana axes, sehatra hita, tsipika, stampings, spindles, fitaovam-pandrika ary ny ampahany miavaka indrindra. Ny fanasitranana fanasitranana indiana dia ampiasaina matetika ho an'ny metaly manify manify, nefa azo ampiasaina amin'ny fitaovana hafa koa. Ny fanamafisana ny fizarana dia ny fanamafisana ny fitaovana amin'ny hafanana amin'ny 723 ° C (austenitic temperature) ary avy eo famenoana haingana ny vy, matetika miaraka amin'ny famonoana indostrialy rano. Ny tanjon'ity fampiharana fanamafisam-peo ity dia ny fanovana ny rafitry ny vy mba hampitomboana ny hamafiny, ny heriny amin'ny heriny, ary ny fihenany. Ny kofehy izay mihamafy amin'ny fanasitranana induction dia avy amin'ny 0.3% ka hatramin'ny 0.7% carbon.
Manana zavatra maro izahay famokarana haintinihana induction ao amin'ireto sehatra manaraka ireto:
1. Fampihetseham-pamoretana fampidinana ny ampahany môtô toy ny valva, koban-kavoana, ny familiana fiara, ny fametahana ary ny starter
2. Induction hardening fitsaboana ny ampahany fampitaovana, toy ny CV, ny tulips ary ny vala
3. Fampihetseham-pamoretana fampidinana ny fampiofanana, toy ny rodom-borona, loharano ary fampakarana fitaovam-piadiana
4. Fampihetseham-pamoretana fampidinana ny sombin-tsavily ho an'ny kodiarana automatique sy manual, ho an'ny peratra, sifidianana sy ny angona masoandro
5. Fampihetseham-pamoretana fampidinana ny loharanon-tsakafo sy ny valan-dresaka
Induction hardening dia metaly fitsaboana metaly metaly izay manome fomba amam-panafody sy azo ampiasaina tsy misy mifandray amin'ny ampahany metaly na ny fitaovana hafanana. Ny hafanana dia avy amin'ny famindrana herinaratra elektrika hikoriana ao amin'ilay zavatra hafanana. Izany dia manome fahasamihafana ara-toekarena, mikendry sy haingana ny fitondrana fitaovam-pitaterana.